रातको समयमा किच्कन्याले यसरी फसाउन सक्छिन् पुरुषलाई ! यस्तो हुन्छ किच्कन्याको हर्कत ! – KhabarTime
रातको समयमा किच्कन्याले यसरी फसाउन सक्छिन् पुरुषलाई ! यस्तो हुन्छ किच्कन्याको हर्कत !
किच्कन्याको कथा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । कतिपयले किच्कन्या भेटेको या किचकन्याले लखेटेको भन्ने गरेका छन् । किच्कन्या नेपाल र भारतीय समाजमा प्रचलित किम्वदन्ती र कथाहरुको भूत हो । यसले महिलालाई कुनै हानीनोक्शानी पुर्याउँदैन पुरुषलाई भने हानी पुर्याउनेगरेको विश्वास छ । भारतमा चुडैल पनि भन्ने गरिन्छ । तर, चुडैलभन्दा किचकन्या केही भिन्न मानिन्छ । यसले हानी नोक्शानी पनि पुर्याउने गरेको बताइन्छ ।
सम्बन्ध बनाउन पल्केको पुरुष विस्तारै सुक्दै जान्छ र मृ त्युको अवस्थामा पुग्छ । राजा महाराजाहरु पनि किचकन्यासँग फसेको किम्वदन्ती छ । किचकन्यासँग मल्ल राजा प्रताप मल्ल समेत फसेको किम्वदन्ती छ । पछि उनलाई तान्त्रिकले छुटाइदिएका थिए ।
नित्याशिवाको 'दिल यो मान्दैन के म मरुँ ?' भिडियोमै हेर्नुस्